काठमाडौँ । हामी सबैलाई थाहा छ, भायानेटले केहि समय अघी काम गर्ने, खेल्ने र पढ्ने बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्न आफ्ना ग्राहकहरूलाई उच्च-गति, उच्च-गुणस्तरको इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले आकर्षका अफर सहित,"अल्ट्रा-फाई प्याक" लन्च गरेको थियो । यसै अफरमा ग्राहकको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै भायनेटले अब "भायानेट अल्ट्रा-फाई टिकटक च्यालेन्ज" नामक टिकटक प्रतियोगिता ल्याएको छ । यो प्रतियोगिता कुनै पनि उमेर समूहको लागी खुल्ला छ ।
प्रतियोगितामा भागलिन रचनात्मक र मनोरञ्जनात्मक भिडियोको साथमा भायनेटको आधिकारिक टिकटक च्यानलमा भएको साउन्ड ट्र्याक प्रयोग गरी भिडियो अपलोड गरेर सहभागी हुन सकिने छ ।
भायानेट अल्ट्रा-फाई टिकटक च्यालेन्जका नियम र सर्तहरू
१) यो प्रतियोगिता जनवरी ०१, २०२२ देखि फेब्रुअरी २८, २०२२ सम्म खुला छ रहनेछ ।
२) सबैभन्दा रचनात्मक सामग्री भएको सहभागीले रु. ५० हजार जित्नेछ (सबै पुरस्कारमा नेपाल सारकार द्वारा निर्देशित कर लागु हुनेछ )
३) सहभागीहरूले आफ्नो क्याप्शनमा #ULTRAFI_Vianet ह्यासट्याग प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्दा @vianetcommunication ट्याग गरेको हुनुपर्छ ।
४) सहभागीहरूले आफ्नो भिडियो २७ फेब्रुअरी भित्र अपलोड गर्नुपर्छ (अर्थात्: मध्यरातसम्म) ।
५) भायनेटसँग प्रिन्ट विज्ञापन/बाहिर र डिजिटल मिडियामा कुनै पनि प्रचारात्मक प्रयोगको उद्देश्यका लागि सहभागी/विजेताहरूको प्रोफाइल तस्वीर/जानकारी प्रयोग गर्ने अधिकार रहने छ ।
६) भायनेटका कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरू प्रतियोगितामा जित्नका लागि योग्य हुने छैनन् । यदि विजेता कुनै पनि हिसाबले कर्मचारी वा परिवारको सदस्यको रूपमा सम्बन्धित भएको पाइएमा, प्रविष्टि र प्रतियोगीलाई अयोग्य घोषित गरिनेछ ।
७) पुरस्कारहरू हस्तान्तरण गर्न मिल्ने छैन ।
८) सहभागीलाई आफ्नो रुचि अनुसार पुरस्कार माग्ने अधिकार हुने छैन । पूर्ण वा आंशिक रूपमा पुरस्कारको लागि कुनै विकल्प प्रस्ताव गरिने छैन ।
९) प्रतियोगितामा नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले मात्र भाग लिन पाउनेछन् ।
१०) यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार भायनेट कम्युनिकेसन्समा सुरक्षित छ र कम्पनिको निर्णय अन्तिम र अपरिवर्तनीय रहनेछ ।
११) कुनै विवाद भएमा, भायनेटले प्रतियोगिताको सम्पुर्ण निर्णयको अधिकारहरू राख्छ ।
काठमाडौँ । भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रा. लि ले पश्चिम नेपालमा आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपालसँग साझेदारी गरेको छ । चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज चाइना टेलिकम्युनिकेसन्स कर्पोरेशनको सहायक कम्पनी हो
भायनेटको डाटा ह्याक गर्ने युवक बुटवलबाट पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले भायनेट कम्युनिकेसनको ग्राहकको तथ्याङ्क ह्याक गर्ने युवकलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोको टोलीले रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका १ बस्ने १७ वर्षीय युवालाई पक्राउ गरेको हो